I-FTA ibongoza iiarhente zokuhamba zase-US ukuba zonyuse amazinga okugonya
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » uthutho » I-FTA ibongoza iiarhente zokuhamba zase-US ukuba zonyuse amazinga okugonya
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Ukubambisa • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zeMpilo • iindaba • abantu • Ukuhamba ngololiwe • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Safety • Tourism • uthutho • Iindaba zeWired Travel • Iindaba zase-USA ezaphulayo • Iindaba ezahlukeneyo
Ulawulo lwe-Federal Transit Administration (FTA) lubiza iinkokheli zohambo ukuba zabelane ngolu lwazi nabasebenzi, kwaye benze konke okusemandleni ukukhuthaza ukugonywa phakathi kwabasebenzi.
Iirhafu zokugonya ze-COVID-19 ziyaqhubeka ukwanda kwi-USA iphela.
Ukuthandabuza isitofu sokugonya kuye kwehla nakwilizwe.
Iiarhente zothutho zaseMelika zikhuthazwe ukuba ziqinisekise ukugonywa kwabasebenzi bezothutho.
Njengokuba iirhafu zokugonya ze-COVID-19 ziqhubeka nokunyuka kwi-Unites States, i-Federal Transit Administration (i-FTA) icela iiarhente zokuhamba ukuba ziqinisekise ukuba abasebenzi bezokuhamba kunye noluntu banamathuba onke okufumana iyeza lokugonya.
Ngokuka Mayo CI-linic kunye namaziko oLawulo lweNtsholongwane kunye noThintelo (CDC), Kwiinyanga ezimbini ezidlulileyo, abantu abaninzi baseMelika sele beqalisile ukugonyelwa i-COVID-19. Kwakungelo xesha apho uLawulo lwezoKutya kunye neDrug luvumile ugonyo lwe-Pfizer-BioNTech COVID-19 ngo-Agasti 23.
Ukuthandabuza isitofu sokugonya kuye kwehla, ngokokuvota kwe-Ipsos. Kuphela liipesenti ezili-14 zabantu baseMelika abathi ngoku akunakulindeleka ukuba bagonywe.
Ulawulo lwe-Federal Transit Administration (FTA) ibiza iinkokheli zohambo ukuba zabelane ngolu lwazi nabasebenzi, kwaye benze konke okusemandleni ukukhuthaza ukugonywa phakathi kwabasebenzi. Ezinye iiarhente zibonelele ngekhefu elihlawulelwayo ukuze bafumane iyeza lokugonya, amabhaso ezinkozo, okanye amakhadi ezipho ukukhuthaza abasebenzi ukuba bagonywe.
Ukongeza, kwezi arhente zisebenze nzima ukukhuthaza ugonyo kwindawo yakho, sinethemba lokuba uya kuqhubeka naloo mizamo, kwaye uqale ezintsha. Abantu abaninzi baseMelika bafuna isitofu sokugonya kunye nokuhamba kunokubanceda ukuba baye kwiindawo zokuqeshwa okanye bazise amathuba okugonya kwiindawo abahlala kuzo. Ukunceda ukwabelana ngomyalezo wokugonya kwindawo yakho, amanqanaba e-CDC kwinqanaba lokuqikelela ukuthandabuza isitofu sokugonya se-COVID-19 inokuchonga iindawo ngaphakathi kwenkqubo yenkqubo yohambo enokuthi ifune uncedo olongezelelekileyo lokufikelela kwisitofu sokugonya.
Ugonyo lolona hlobo lusebenzayo lokuzikhusela kunye nabo bakungqongileyo kwisivumelwano se-COVID-19. Ukwandisa ukhuseleko kukwahluka kwe-Delta kunye nokuthintela ukusasazeka kwabanye, i-CDC icebisa wonke umntu ukuba agonywe ngokukhawuleza. I-FTA ibongoza abasebenzi bethutho abaphambili - kunye neearhente zohambo abasebenzela zona - ukuba benze izicwangciso zokuba bagonywe kwaye baqhubeke nokwenza lula ukufikelela kwiindawo zokugonya amalungu oluntu ekusafuneka ukuba adutyulwe.
I-FTA ixhasa iinzame zokugonya iarhente yothutho ngokunikezela ngezibonelelo phantsi kwesiCwangciso sokuhlangula saseMelika ukunceda ukuhlawula ezi ndleko kunye nokukhuthaza iinkokheli zezothutho ukuba zibonelele ngeenkonzo ezenza ukuba kwenzeke kuluntu lwabo, kubandakanywa nabasebenzi babo, ukufumana iifoto zabo. Iiarhente zothutho ezinqwenela ukufumana ulwazi oluthe kratya malunga nokufaneleka kwenkxaso mali kufuneka zityelele ii-FAQ ze-FTA ngokubhekisele kwi-COVID-19.
I-FTA ikwakhuthaza iiarhente zohambo ukuba zisebenzise iCDC, iSebe lezoThutho laseMelika kunye noKhuseleko eMsebenzini noLawulo lwezeMpilo (OSHA) zixhobo ukunceda ukwandisa ukuzithemba kunye nokuthathwa kwezitofu ze-COVID-19 phakathi kwabasebenzi bokuhamba.